လိုဇာနို ဂိုးသွင်းပြီး အသေးစား ငလျင်ဖြစ်တဲ့ထိ အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ မက္ကဆီကိုပြည်သူများ
18 Jun 2018 . 3:00 PM
ဂျာမနီအသင်းဘက်ကို တစ်လုံးတည်းသော အနိုင်ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ လိုဇာနို Lozano ရဲ့ သွင်းဂိုးအပြီး မက္ကဆီကို ပြည်သူတွေဟာ ငလျင်အသေးစား ဖြစ်ပေါ်တဲ့အထိ အောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။ မြေငလျင် လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Simmsa က မက္ကဆီကိုစီးတီးမှာ ငလျင်အသေးစားတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မက္ကဆီကို ဒေသစံတော်ချိန် (၁၁း၃၂)နာရီမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ အပျော်က ငလျင်အသေးစား တစ်ခုအထိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ရစ်ခ်ျတာစကေးအတိအကျကို ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပေမယ့် ငလျင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပြ လှိုင်းတွေကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသော မက္ကဆီကို ပြည်သူတွေဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ လက်ရှိချန်ပီယံ ဂျာမနီအသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ အုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်ကို အတူတကွ ကြည့်ရှုခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မက္ကစီကိုစီးတီး မြို့လယ်ခေါင်မှာရှိတဲ့ Zocalo square မှာ ဂျာမနီအသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်ကို ပရိုဂျက်တာ (Projector) နဲ့ ပြသခဲ့ပြီး ပွဲအပြီးမှာ မက္ကဆီကို နိုင်ငံအလံတွေကို ဝှေ့ယမ်း အောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်။ အုပ်စုတွင်း အင်အားအကြီးဆုံး ဂျာမနီအသင်းကို အနိုင်ရခဲ့လို့ မက္ကဆီကိုအသင်း နောက်တစ်ဆင့်အတွက် အခြေအနေ ကောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ မက္ကဆီကိုအသင်းဟာ လာမယ့် စနေနေ့မှာ တောင်ကိုရီးယားအသင်း၊ ဇွန်လ (၂၇)ရက်နေ့မှာ ဆွီဒင်အသင်းတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Photo:Press Cute News, Simmsa Twitter, SkyNews
လိုဇာနို ဂိုးသှငျးပွီး အသေးစား ငလငျြဖွဈတဲ့ထိ အောငျပှဲခံခဲ့တဲ့ မက်ကဆီကိုပွညျသူမြား
ဂြာမနီအသငျးဘကျကို တဈလုံးတညျးသော အနိုငျဂိုးသှငျးယူပေးခဲ့တဲ့ လိုဇာနို Lozano ရဲ့ သှငျးဂိုးအပွီး မက်ကဆီကို ပွညျသူတှဟော ငလငျြအသေးစား ဖွဈပျေါတဲ့အထိ အောငျပှဲခံခဲ့ကွပါတယျ။ မွငေလငျြ လလေ့ာစောငျ့ကွညျ့ရေး အဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈတဲ့ Simmsa က မက်ကဆီကိုစီးတီးမှာ ငလငျြအသေးစားတဈခု ဖွဈပျေါခဲ့ကွောငျး ထုတျပွနျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ မက်ကဆီကို ဒသေစံတျောခြိနျ (၁၁း၃၂)နာရီမှာ ပွညျသူတှရေဲ့ အပြျောက ငလငျြအသေးစား တဈခုအထိ ဖွဈပျေါခဲ့ပါတယျ။ ရဈချြတာစကေးအတိအကကြို ထုတျပွနျခွငျးမရှိပမေယျ့ ငလငျြဖွဈပျေါခဲ့တယျဆိုတဲ့ အခကျြပွ လှိုငျးတှကေို ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
ထောငျပေါငျးမြားစှာသော မက်ကဆီကို ပွညျသူတှဟော ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲရဲ့ လကျရှိခနျြပီယံ ဂြာမနီအသငျးနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ အုပျစုအဖှငျ့ပှဲစဉျကို အတူတကှ ကွညျ့ရှုခဲ့ကွတာ ဖွဈပါတယျ။ မက်ကစီကိုစီးတီး မွို့လယျခေါငျမှာရှိတဲ့ Zocalo square မှာ ဂြာမနီအသငျးနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျကို ပရိုဂကျြတာ (Projector) နဲ့ ပွသခဲ့ပွီး ပှဲအပွီးမှာ မက်ကဆီကို နိုငျငံအလံတှကေို ဝှယေ့မျး အောငျပှဲခံခဲ့ကွပါတယျ။ အုပျစုတှငျး အငျအားအကွီးဆုံး ဂြာမနီအသငျးကို အနိုငျရခဲ့လို့ မက်ကဆီကိုအသငျး နောကျတဈဆငျ့အတှကျ အခွအေနေ ကောငျးသှားခဲ့ပါတယျ။ မက်ကဆီကိုအသငျးဟာ လာမယျ့ စနနေမှေ့ာ တောငျကိုရီးယားအသငျး၊ ဇှနျလ (၂၇)ရကျနမှေ့ာ ဆှီဒငျအသငျးတှနေဲ့ ယှဉျပွိုငျကစားသှားမှာဖွဈပါတယျ။
by Naing Linn .9mins ago